Erling Haaland Oo Magacaabay TODDOBA Weeraryahan Ee Isaga Ka Wanaagsan Waqtigan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaErling Haaland Oo Magacaabay TODDOBA Weeraryahan Ee Isaga Ka Wanaagsan Waqtigan
Erling Haaland Oo Magacaabay TODDOBA Weeraryahan Ee Isaga Ka Wanaagsan Waqtigan
Weeraryhanka reer Norway ee Erling Haaland ayaa daboolka ka qaaday magacyada toddoba weeraryahan oo uu sheegay in ay isaga ka wanaagsan yihiin, kuwaas oo qaar ka mid ah ay joogaan horyaalka Ingiriiska ee Premier League.
Gool-dhaliyahan Borussia Dortmund oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan, isla markaana xilli ciyaareedkan ah weeraryahanka ugu goolasha badan tartanka Champions League ayaa isagu iska reebay liiska toddobada weeraryahan ee ugu wanaagsan.
Laacibkan oo waraysi siinayay warbaahinta VG, ayaa waxa la weydiiyey kuwa ay yihiin weeraryahannada waqtigan ugu fiican dunida, waxaanu soo xushay shan xiddig oo ka ciyaara Premier League oo uu ku ku daray labo kale.
Luis Suarez oo Atletico Madrid ah iyo Lionel Messi ayaanu midkoodana kusoo darin xiddigihiisa, laakiin waxa uu booskiisa u diyaariyey Cristiano Ronaldo iyo Robert Lewandowski.
Shanta weeraryahan ee kale ee ka ciyaara Premier League, ayaa waxa hoggaaminaya Harry Kane oo Tottenham ah, isla markaana farta lagu fiiqo marka laga hadlayo weeraryahannada ugu fiican dunida waqtigan.
Waxa kale oo uu kusoo daray liiskiisa Sergio Aguero oo inta badan xilli ciyaareedkan u jiifay dhaawac, xagaaga soo aaddanna soo afjaraya toban sannadood oo uu Man City u ciyaarayay.
Pierre-Emerick Aubameyang oo Arsenal ah, horena ugu ciyaari jiray Borussia Dortmund oo uu Haaland u ciyaaro waqtigan, ayuu kusoo daray liistadiisan, waxaanu ku xigsiiyey Roberto Firmino oo Liverpool ah.
Timo Werner oo ay Chelsea xagaagii ka soo iibsatay RB Leipzig ayaa sidoo kale ku jira weeraryahannada uu Haaland u magacaabay in ay yihiin kuwa ugu fiican.